Ngokungangabazeki, ngamunye wethu, uma kuziwa esikhathini bazilungisele umshini, kuba isinqumo esinzima. Wonke umuntu ufuna ukuthenga aphakeme zokwakha ikhwalithi Yiqiniso, ngesikhathi intengo imali. Kube emakhaya nemasontfo yesimanje zakhelwe ukuhlangabezana eziningi izidingo, futhi ukuvumelanisa izindonga emakamelweni azidingeki ukwakha izakhiwo eziyinkimbinkimbi, izakhiwo zezakhiwo ezindala nezinkinga ukulungisa okuningi.
Ngokuvamile kobuso izindonga ayiyinhle, futhi uma, isibonelo, ufuna ukwenza usimende zokuhlobisa noma ukupenda izindonga, kumele uqonde kahle bona. Kukhona nje iza ngendlela efana ukuqondanisa kwezindonga plasterboard. Le ndlela kunezinzuzo eziningana. I sokuqala nesibaluleke - it is a impahla yemvelo (Gypsum asidi eduze komuntu isikhumba asidi). Futhi ngosizo ngeziningi zezinto zokwakha ungakwazi ukuxazulula inkinga umsindo ukwahlukanisa, futhi izindlu ezakhiwe ngokhuni - ukumelana umlilo. Ukuhambisana izindonga plasterboard efanelekayo zangasese, uma uthenge umswakama-ubufakazi amashidi, okungase sebeqedile ebhekene tile.
Ngaphezu amanzi nemithi (Gypsum plasterboard) nelangabi nemithi (GKLO) kunezinhlobo ezingaphezu ezimbili okwakhiwa ngalo la mabhodi. GCR - evamile; asetshenziswe ezindaweni nomswakama isihlobo 75%, umbala grey. Futhi GKLVO - manzi, nge ukumelana lenyuka emiphumeleni umlilo evulekile. umbala Ezazimzungezile - abomvu.
Izindlela ze- axube okwakhiwa ngalo la mabhodi odongeni
Ukuhambisana plasterboard izindonga kungase kwenziwe izindlela ezimbili eziyisisekelo. Eyokuqala ukwakhiwa luhlaka metal, kulandele nokubopha amashidi nalokho. Eyesibili (frameless) - gluing amashidi usebenzisa ingxube ingcina. Le ndlela elula ngalolo kuthatha izikhathi eziningi isikhathi esingaphansi obandayo ukwakhiwa plasterboard zangaphambi bazakha. Kodwa kulokhu asazi ukuxazulula le nkinga ukwahlukanisa eyengeziwe acoustic futhi ezishisayo. Ngakho-ke, ukukhetha indlela ukubophela okwakhiwa ngalo la mabhodi odongeni, kudingeka sikhumbule lokho isebenta ke bazocula egumbini.
Cabanga kabanzi ngasinye Kulezi zindlela ezingenhla. Indlela I-frameless obandayo efanelekayo ezimweni lapho izindonga babe semfene ezincane. Ukusebenza nqubo elula: I-ishidi kusuka ohlangothini reverse nge spatula ngamazinyo isentimitha ngesakhiwo ukwakheka ingcina. Ezindaweni ukuthi uqondane semfene anamatheliswe phezu kwamanzi, engeza glue kancane ngaphezulu. Ngakho sigcwalisa ngalo ingaphakathi phakathi amashidi, nogange. Ungakhohlwa ukuhamba ngo kuhlangana khona izingqimba ezimbili ibanga mayelana 5-7 mm. Lokhu kungenxa yokuthi ibhodi Gypsum kuyinto "esiwuhogelayo" ezibonakalayo, okungukuthi, begodu kukhula nomswakama ngabe ukwandisa njengoba amashidi. Lezi ezivuzayo thina obutholakala putty kuphela.
Ukuhambisana izindonga plasterboard indlela obandayo Uhlaka eyenziwe iphrofayela perforated kancane more xaka, kodvwa lisiniketa ticondziso ithuba olunye vimbela egumbini. Ngaphambi kokuqhubeka ukuklanywa ukukhiqizwa, kubalulekile ukuba sigqoke zonke layout phansi, lapho ngeke unamathisele amaphrofayli mhlahlandlela. Ngosizo ezingeni laser noma yomthofu wokumisa, kuba lula kakhulu, ezifana Ukumaka idluliswe ophahleni, ke izindonga. Ngaphezu kwalokho amaphrofayli yokubeka ezifakiwe Umhlahlandlela, futhi yasibamba ngezikulufo. I ukushuba ishidi esezingeni okwakhiwa ngalo la mabhodi kuyinto 120 cm. Cm Ngakho-ke, ibanga phakathi amaphrofayli umzimba kumele kube 60 kuya ishidi waphumula ngokumelene yokubeka yazo ephakathi nendawo e iphrofayli lapho kuxhunywe. Ukuhlinzeka eyengeziwe amaphrofayli rigidity yokubeka ukuxhuma webs transverse. Izimbobo ugcwalise amaminerali uvolo noma ezinye izinto ukuze vimbela. Nale umsebenzi kungase kudingeke basize ngokwabo, kodwa ukwenza ngokuhlakanipha, ungakwazi kuphela kokuba okungenani likhono kancane. Ngakho-ke, ngo-siphendule umbuzo othi: "Indlela ukuvumelanisa plasterboard udonga" ngaphandle professional ungeke ukwenze. Ikakhulukazi uma ufuna ukuvumelanisa izindonga ngaphandle ukwenza ophahleni lokuhweba, ndima arched zangaphakathi noma niches abayoyenza izincwadi zakho ozithandayo.
Indlela bageze amafasitela ngaphandle streaks? Ezinye iseluleko esisebenzayo
Ukulungisa ezisheshayo panel yokugezela plastic
Zinc oxide: isicelo, kuvetwa kwebalingisi kanye ukudaya amasu
Iminyango-Finnish indlu ezweni. Izithombe kanye nokubuyekeza
Izinzuzo laminate Isinyathelo Quick
Ombre Loreal: ukubuyekezwa kanye namathiphu
Uyini umahluko kusuka imiqulu sushi
Amakhukhi ngokusebenzisa grinder inyama. Recipe kusukela ebuntwaneni bethu
"Relight" ehhotela eMoscow: Ziphathe ukuhlala ezihlukahlukene futhi ukhululekile
Zilungiselele cocktail, "Blue Hawaii"
Uyini amaphoyisa izivakashi. amaphoyisa izivakashi e Moscow
Ifayela P7S ngefomethi: obala futhi lokho ukusetshenziswa
Cowberry lapho ekhula eRussia?
16 Agasti. Amaholidi, izimpawu zikazwelonke, uphawu lwezodiac
Kim Ngakho Yun (actress, 1980). Kim Ngakho-yeon: Biography, ukuphila siqu futhi amaqiniso athakazelisayo
Kanjani futhi kuphi isicelo njani ngifake isahlukaniso?